Zvizhinji nezve LibreOffice, iyo yakavhurwa sosi hofisi suite | Linux Vakapindwa muropa
Mune Nyaya yapfuura, Ndakaita ongororo pfupi yenhoroondo ye LibreOffice chirongwa, kubva pakutanga kwayo senge processor yezwi remakomputa epamba, kune iyo multiplatform hofisi suite yatinoziva nhasi.
Vashandisi veLinux vanoziva kwazvo hunhu hweiyi hofisi suite. Asi, kune vanhu vazhinji vaingodzidziswa muzvikoro kuti Microsoft Office iriko, kana kuti nekuti hukama hwavo nekomputa hunongova nemasaira ivo vanongoshandisa Google Docs. Nekudaro, kunyange kune vakawanda zvingave zviri pachena, zvinoita sezviri nyore kuvayeuka.
LibreOffice hofisi suite iyo inoumbwa neanotevera mafomu:
Munyori: Izwi processor.
Calc: Chirongwa cheSpreadsheet.
Impress: Chishandiso chekugadzira mharidzo.
Dhirowa: Chishandiso chekugadzira madhayagiramu uye madhayagiramu.
Base: Wizard yekugadzira uye kugadzirisa dhatabhesi
Math: Iyo inoshandiswa kuratidza masvomhu mafomula.
Izvo zvakakosha kutaura kuti kunyangwe hofisi suite inogona kutorwa pasi uye kushandiswa mahara, zvinokwanisika kuwana rutsigiro rwemakambani.
Certified LibreOffice Vagadziri: Ivo inyanzvi vane kugona kwakaratidza kugona LibreOffice kodhi: gadzira matsva maficha; ipa rutsigiro kune vashandisi vebhizinesi, tsvaga mhinduro uye uzviite. Mhinduro dzakagadzirwa dzinoitwa kuti dziwanikwe kunharaunda.
Certified LibreOffice Yekufambisa Vanobvunza: Aya mahunyanzvi anoshandisa iyo yekufambisa protocol yakagadzirwa neThe Document Foundation kana imwe nzira yekuisa LibreOffice mumasangano makuru. Chinangwa chayo kudzikisira kurasikirwa kwekugadzirwa uye kuramba kushanduka kubva pane dzimwe nzira dzekudyara.
LibreOffice Professional Varairidzi: Ivo vanhu vane kugona kugadzira zvirongwa zvekudzidzisa pamatanho ese ekushandisa hofisi suite. Ivo vanogona kuita izvi vachishandisa maSystem's protocols kana imwe nzira.
1 Zvimwe nezve LibreOffice. Simba rako.
2 Zvinyorwa zvinyorwa
Zvimwe nezve LibreOffice. Simba rako.
Zvimwe zvezvikonzero zvekupa hofisi yeLibreOffice suite ndeiyi:
Multiplatform: Chirongwa ichi chinowirirana neanenge ese desktop desktop anoshanda; Windows, macOS, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, uye Haiku. Mu Chromebook unogona kushandisa iyo Linux vhezheni pamakomputa emazuva ano kana forogo inonzi Collabora Hofisi mune yechizvarwa fomu.
Shanduro inotakurika: Iyo Windows vhezheni yechirongwa inogona kutorwa padanda re USB uye yoshandiswa pasina kuisa.
Kubatanidzwa kwezvose zvinoshandiswa: Kubva kune chero ezvirongwa zve suite, zvinyorwa kubva kune zvimwe zvinoshandiswa zvinogona kuvhurwa uye kugadzirwa. Semuenzaniso, kubva kuMunyori tinogona kugadzira spreadsheet.
Zvishongedzo: LibreOffice inogona kuwedzera mashandiro ayo neinopfuura mazana matatu nemakumi matatu ekuwedzera ekuwedzera uye anopfuura mazana masere eOfreeOffice.
Kunyora rubatsiro: Kana chiperengo chisiri chinhu chako, usazvidya moyo. LibreOffice ine girama yekutarisa system uye mamwe maduramazwi pakati pekuwedzera.
Kuwana mifananidzo: Kuburikidza nekuwedzera iwe unogona kuwana iyo Openclipart.org repository. Rutivi rutsigiro rwekuisa emojis.
Kutaurirana negwaro manejimendi software: Tsigiro yeAlfresco, Google GDrive, Nuxeo, MS SharePoint, MS OneDrive, IBM FileNet Lotus Live Mafaira, Lotus Quickr Domino, OpenDataSpace uye OpenText ELS.
IKunze kwemagwaro mune mafomati epamoyo: LibreOffice inogona kuvhura mafomati anotevera: CorelDraw (v1-X7), Corel Presentation Exchange, Adobe / Macromedia Freehand (v3-11), Adobe PageMaker, Zoner / Callisto Draw (.zmf), QuarkXPress 3.1 kusvika 4.1, MS Visio (2000- 2013),
DXF, MET, PBM, PCD, PCX, PGM, PPM, PPM, RAS, SGF, SVM, TGA, XBM, XPM, BeagleWorks, ClarisWorks, GreatWorks, MacPaint, MacWorks, SuperPaint, MacDraw, MacDraw II, RagTime yeMac 2- 3, ClarisDraw, MacDraft pakati pevamwe.
Dhatabhesi engines: FirebirdSQL ndiyo default injini yekugadzira dhatabhesi. Inogona zvakare kubatana kuMariaSQL uye PostgreSQL.
LibreOffice inogona kushanda zvisina musikirwo nemafomati eMicrosoft Office mafomati ane chero asina kukwana ekuenderana. Asi, yayo yemhando fomati ndeye OpenDocument Fomati. Iyi fomati yakaziviswa seyero repasi rese pasi pezita rekuti ISO / IEC JTC1 SC34.
Pfungwa iyi yaive yekugadzira imwe nzira yekuvhara magwaro ekuchengetedza ayo anoenderana nesarudzo dzebhizinesi dzemakambani akazvimirira.
Iko kushandiswa kweODF kunovimbisa kuti fomati yaive yakachengetwa magwaro haitaridze software yainoshanda nayo (kana zvinopesana). Mafaira ari muOverDocument Fomati (ODF) ipuratifomu yakazvimiririra uye haitsamire pane chero software.
Kunyangwe nehunyanzvi fomati imwechete ichishandiswa zvisineyi nebasa rechirongwa, kuita kuti zvive nyore kuwana mafaera, mazita akasiyana anoshandiswa akasiyana mafomu. Semuenzaniso: .odt (zvinyorwa) .ods (yemaspredishiti), .odp (yemharidzo)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvizhinji nezve LibreOffice, iyo yakavhurwa sosi hofisi suite
Mutsara uyu hapana kukanganisa?
LibreOffice inogona kuwedzera mashandiro ayo neinopfuura mazana matatu nemakumi matatu ekuwedzera ekuwedzera uye anopfuura mazana masere eOfreeOffice.
Ini ndinofunga pakupedzisira iwe waida kuisa OpenOffice.
Ndizvozvo. Ndatenda nekuzivisa kwako.
Semunhu anoshandisa linux uye openoffice, ini ndichiri kuwana zvimwe zvekushandisa izvo zvinoita kuti kusimuka kubva kuMsoffice kuenda kune ino kunetsa, uye kuenderana kwayo mumafomati egwaro senge powerpoint uye yakadhindwa, kubvira paine mharidzo yakaitwa musimba remagetsi uye kuverenga mukushamisa fomati yakanganisika uye iwe unofanirwa kugadzirisa kubva kunobva kune zvifananidzo ... uye zvakafanana zvinoitika kana uchiverenga gwaro kubva kuvhuraoffice kuenda ku PowerPoint ... izvi zvinhu zvinoita kuti kusangana kuve nyore